မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: It's Time for JKS's sexy back (or) fan meeting 6
Posted by mabaydar at 3:35 AM
ဟိုက်. . .အတင်းကြီးကို တိုနေတော့တာပါပဲလား။
ဟီး. . ညည်းအမနဲ့ အတူတူ ထားရမယ်။
"ဟီး. . ညည်းအမနဲ့ အတူတူ ထားရမယ်။ "
မဗေဒါ အစ်မ အကြောင်းက ဘယ်က ပါလာတာလဲ... ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ မသိဘူး...
မဗေဒါသဝန်တိုတယ်ဆိုလို့ မျက်လုံးတဘက်ပိတ်ပီးတဘက်နဲ့ဘဲ ပြူးပြဲကြည့်သွားတယ်..အဟက်
နောက်တာ မဗေဒါရေးထားတာလာလာဖတ်ပီး မင်းသားကိုသဘောကျလာပီ ကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ :D
(အနာလိုနဲ့နော် သားသားကြည့်တွားတာတော့) ကွိကွိ..း)))
အယ်. . ဟုတ်ဘူးလေ. ညီမကလဲ။
အကိုက ညီမတော်ထားတာ ဆိုတော့. .
အကို့ရဲ့x x x က ညီမ အစ်မလို့ ဆိုလိုတာလေ။
အဟဲ. . ဒါကို ပြောတာပါ။
ကျွန်မအကြောင်းသိသွားလို့နဲ့တူတယ်။ ခဏခဏမကြည့်ဖို့ တားထားတယ်တော့။ အီး......
(တကယ်လို့ ဂျန်ဂမ်ဆပ်သာ ကျွန်မကို ချစ်ရေးဆိုခဲ့ရင် လုံးဝ လက်မခံဘူး...)
sexy dance ကြီးတော့ ကြိုက်ဘူး။ အက ကိုပြောတာပါ။ လူမပါဘူး။း)
5/26/2010 8:23 PM
ဒီမင်းသားတော့နော် ကြည့်မရတော့ဘူး ၊ နဂိုကတည်းက
5/27/2010 4:59 AM
မဗေဒါ အဲလိုရေးလိုက်တော့ သူ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။
သူ့ကို သနားလွန်းလို့ သူကတာကို သေချာတောင် မကြည့်ရက်ဘူး။ !_!
ဒါပေမယ့်လဲ... သူက sexy cutie ပဲလေ။
အရမ်းကြီး မတွေးပါနဲ့ မဗေဒါရယ် နော်။ :)
5/29/2010 1:32 AM